हिड्न शुरु गरे पछि, बाटो आँफैं बन्दै जाने रहेछ ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
हिड्न शुरु गरे पछि, बाटो आँफैं बन्दै जाने रहेछ !
प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०७७, सोमबार September 7, 2020
हिड्न शुरु गरे पछि, बाटो आँफैं बन्दै जाने रहेछ !!
~५० हजार भन्दा बढि सबस्क्राइबर
~४२७ जना आत्महत्या बाट मोडिएको सन्देशहरु संकलित
~हजारौंको जीवन परिवर्तन आहारचर्या र दिनचर्या बदलिएको प्रतिकृया ~~~~~~~
छोटो समयमै ५० हजार भन्दा बढीले “अर्गानिक रुपमै “YouTube”लाई सब्स्क्राईब’ गरिदिएर मलाई थप उर्जा प्रदान गर्नु भएकोमा म लगायत ‘द माइन्ड पावर सोसाईटि समुह’ अत्यन्त आभारि छौं । भुगोलको विभिन्न कुनामा उभिएर पनि हामि यी शब्द र आवाज मार्फत एउटै तरङ्गमा जुटेका छौं । तपाईंं हरुले खन्याउंनु भएको यो प्रेम ,सकारात्मक सोच’ यो विश्वमा बांचोस् जीवनमा केहि गर्न सकिन्छ भन्ने आशामा एकैसाथ एउटै सकारात्मक तरङ्गमा विश्व भर बाट जुटेका छौं । प्रत्यक्ष नभेटे पनि नबोले पनि हामि एुउटै परिवारका भएका छौं, ५० हजार भन्दा बढी सदस्यको । यो धरा धामका प्रिय सहयात्रिहरु तपाईंले दिनु भएको यो माया र सद्भभाव प्रति अत्यन्त आभारि छु । सन्ख्या त केहि होइन तर तपाईंंहरुको यो अटुट प्रेम र सदासयताले , यो जगमा सकारात्मक सोच ,चिन्तन , योग अध्यात्म र मानवीय मुल्य मान्यतालाई मन पराउंने सज्जन र दिव्य आत्माहरुको कुनै कमि रहेनछ भन्ने मजबुत सन्देश प्रदान गरेको छ ।
सब्स्क्राइबको संख्या जति महत्वपूर्ण छ ,यो च्यानलले पारेको प्रभाव उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हजुरहरु मध्ये ४३५ जनाले भिडियो हेररै आत्महत्या बाट मोडिएर नयां जीवन पाएको प्रतिकृया पठाउंदा मलाई ठुलो नोवेल पुरस्कार पाए सरह भएको छ्।यस्तै हजारौले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आएको ,दिनचर्या बदलेको, जीवन प्रतिको आशा बढेको प्रतिकृया पाउंदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ । यो च्यानल कुनै आर्थिक उपार्जन वा चर्चाका लागि हैन ।मा त कहिं नपुग्न निस्किएको यात्रि । यात्रा मेरो धर्म हो । अनुरक्त्त र विरक्त दुवै त्यागेर हिडिरहनु नै यात्रिको कर्तव्य हो । मार्गमा भेटिने सुन्दर उचाईहरु यात्राका ‘बाइप्रोडक्ट, मात्र हुन्। यहाँं बाट कुनै अर्थ लाभ हुन सकेमा यसको सतप्रतिशत लाभांश नेपालका परोपकार आश्रमहरु मा पुग्ने गरेका छन्। यो च्यानल मा जोडिएर सकारात्मक सोच प्रतिको सम्मान दर्शाउनु भएकोछ । म हजुरहरुको प्रेरणा मात्र हैन हजुरहरु मेरो प्रेरणा बन्नु भएको छ । परोपकार ,मानवीयता ,उत्प्रेरणा ,आरोग्यता ,तत्व बोध, भेदभाव रहित समाजको निर्माण र आदर्श जीवनको विस्तार नै हाम्रो अभियान हो । विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाज मार्फत, वा अन्य उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम बाट हामि अझ तरङ्गगित बन्दै विश्व भरिनै सकारात्मक समाज निर्माणको विस्तारमा आवाज,लेखन ,कर्म र चिन्तन मार्फत दिन दिनै फैलिंदै गएका छौं । विश्व भरि बाट जोडिनु भएका तपाईं तमाम सकारात्मक सोच प्रेमिहरुमा पुन: पुन: कोटि आभार । भिडीयो हेरर प्रदान गर्नुहुने प्रसंशा र आलोचना दुवै मेरा लागि प्रसाद हुन्।
हरेक व्यक्ति संग कुनै न कुनै प्रतिभा अवश्य छ । अरु सँग प्रेरणा लिउं तर आफ्नैं प्रतिभामा फुलौं । चाहे गुरांस भएर फुलौं वा कमल वा पलास ,फुल्नु चैं फुलको धर्म हो । हाम्रो धर्म पनि बाच्दैमा हामि भित्रको सुसुप्तिलाई जगाएर त्यो महाचेतना संङ जोडिनु हो । भोली गएर पश्चाताप गर्दै आजै शुरु गर्नु पर्ने रहेछ भन्नु भन्दा अहिले नै पाईला अगाडि बढाउं । सुख हात परे सदुपयोग गरौ , जटिलता आइपरे धैर्य गरौं । घाऊ लाग्लान तर घाऊ पनि केहि सिकाउंनै आएको हुन्छ । घाऊहरु आत्म प्रकाशका द्वार हुन्। विगतका घाऊ हाम्रा उर्जा पनि हुन्।दु:खाईले अझ मजबुत पार्छ जीवनलाई । दु:ख र कठिनाई बाट नभागौं बरु जागौं । मेरो सम्पूर्ण बांकि जिन्दगीको सम्पूर्ण हिस्सा अब मानव जागरण ,सेवा र उत्प्रेरणामै लागाउंने प्रतिवद्दता व्यक्त्त गर्दछु । आदर्श जीवन , सकारात्मक सोच र चिन्तनको दीपकलाई थप प्रज्वलित पार्न यहाँंहरुले थप्नु भएको प्रेरणा रुपि तेल प्रति अत्यन्त आभारि छु ।